रोचक – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on धनी बन्ने इच्छा छ ? धर्मशास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० गल्ती
No Comments on ब्रा सानो कि’निदिएको भन्दै विवाह भएको ११ घण्टामै डि’भोर्स
लिं’गको आकार कत्रो भए महिलालाई शा’री’रिक स’म्पर्क गर्दा आ’नन्द मिल्छ ? ( जानी राखौँ )
No Comments on लिं’गको आकार कत्रो भए महिलालाई शा’री’रिक स’म्पर्क गर्दा आ’नन्द मिल्छ ? ( जानी राखौँ )
काठमान्डौँ – लिं’गको आकार कत्रो हुनुपर्छ ? यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिं’गको सही आकार कति हो ? यस प्रकारको सोच प्रायः सबै पुरुषको दिमागमा आइरहन्छ, तर अब यसको उत्तर पनि प्राप्त भएको छ । वैज्ञानिकहरूले यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिं’गको आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा युनिभर्सिटी अफ मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरूको एक टिमले हालै एउटा सर्वेक्षण गरेका थिए, जसमा १८ देखि ६५ वर्षका ७५ जना महिला सहभागी थिए ।
यौन’ जिज्ञासा सँगै मानिसहरु यसको बारेमा थाहा पाउन पनि आतुर हुने गर्दछन् र मानिसहरुले धेरै प्रकारको गलत जानकारी पनि दिने गर्दछन् । यस्तै कौतुहलतालाई समाप्त गर्नका लागि पहिलो पटकको सेक्सको बारेमा हामी केहि जान्कारी दिन्छौँ । पहिलो पटकको यौ’न सम्पर्कका बारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्दछ ।
१– यदि पहिलोपटक से’क्स गर्दै हुनुहुन्छ भने चरमोत्कर्षको आशा नराख्नुहोस् । यतिबेला एक अर्काको शारिरिक आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र लिनुहोस । २– यदि तपाईं आफ्नो पहिलो से’क्स धेरै राम्रो हुने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । याद राख्नुहोस् यो तपाईंको लागि नयाँ अनुभव हो र यसका लागि तपाईं धैर्यवान् हुन जरुरी छ । तपाईंको पहिलो से’क्स अनुभव राम्रो नभएपनि यसमा डराउनु र आत्तिनुपर्ने छैैन किनभने यो समय सँगै राम्रो हुँदै जान्छ ।
७– पहिलो पटकको सेक्स निकै पीडादायक हुने धेरै मानिसहरुको भनाई हुन्छ तर यदि ठिक तरिकाले फोरप्ले गरियो र तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो पटकको से’क्स निकै सजिलो र कम पीडादायी हुन्छ । ८–यदि तपाईं पो’र्न स्टारजस्तो सेक्स गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको सोचाई गलत साबित हुनेछ । पो’र्न फिल्ममा देखाइने धेरैजसो झुटो हुने भएकाले यसको पछि नलाग्नुहोस् । ९– पहिलो पटकको से’क्स धेरै लामोसम्म हुने कुरा गलत हो । त्यसकारण पहिलो पटकको से’क्समा कुनै उद्देश्य नराखी मात्र आनन्द लिने तरिकाले गर्नुहोला ।
यसरी यौ’न सम्पर्क गर्नुहोस् गर्भ रहदैन – यौ’न मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै से’क्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर से’क्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । विबाहिताले गर्ने से’क्स र अविवाहिताले गर्ने से’क्समा जोखिम र चुनौताहरु उत्तिकै मात्रामा अघि पछि हुन्छन् । से’क्समा रो’मान्स र आनन्दको कुरा त छँदैछ । यससँगै से’क्स गर्दा ग’र्भ रहन नरहने तरिका अधिकांशको मनमा उब्जिने कुरा हो ।
गर्भ राख्नु भनेको धेरै कुराको तालमेल मिलाउन सक्नु पनि हो । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौ’न सम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म पनि गर्व नरहन सक्छ । यौ’नसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौ’नसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ । तर त्यही अन’पातमा अगाडीका दिनमा वि’र्य नै यो’निमा स्खलन गर्दा पनि ग’र्व रहने सम्भावना अत्यन्तै न्य”न ह’न्छ ।
डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्र’जनन अङ्गभित्र शुक्र’कीटहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, त्यसैले डि’म्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई ग’र्भधारणका दृष्टिकोणले असुरक्षित काल मानिन्छ । सामान्यतः महिनावारीको नवौं दिनमा यौ’नसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ । म’हिनावारी ठीक २८ दिनमा नभै ढिलो चाँडो हुन्छ भने केही सोच्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षित काललाई नै गर्भनिरोधका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ६ महिनासम्मका म’हिनावारीका दिनहरू लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा छोटो महिनावारीबाट १८ दिन घटाउँदा ग’र्भवती हुन सक्ने पहिलो दिन पत्ता लाग्छ भने सबैभन्दा लामो दिनबाट ११ दिन घटाउँदा ग’र्भवती हुन सक्ने अन्तिम दिन पत्ता लाग्छ । उदाहरणका लागि यदि कुनै महिलाको महिनावारी चाँडोमा २४ दिनको र ढिलोमा ३१ दिनको हुने रहेछ भने, २४,१८, ६ हुन्छ, अर्थात् छैटौं दिनदेखि सम्भोग गर्दा ग’र्भ रहन सक्छ ।
बुढेसकालमा यौ’न सन्तुष्टि कसरी लिने ? मेरो उमेर ५६ वर्ष भयो । म दुई वर्षदेखि प्रोस्टेटको बिमारीले पीडित छु । डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि खाँदै छु । तर, डाक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । अहिले मेरो से’क्स गर्ने शक्ति पनि घटेको छ । से’क्स गरेपछि वीर्य स्खलन नभई फर्केजस्तो हुन्छ । अपरेसन गरैंभने मेरो सेक्स पावरमा कुनै गडबडी हुन्छ कि भन्ने डर छ मलाई । मैले कस्तो खालको अपरेसन गर्नु ठीक हुन्छ रु मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोला ।
उमेर ढल्किँदै गएपछि पुरुषहरूलाई प्रोस्टेटको समस्याले दुःख दिन्छ । प्रोस्टेट ग्रन्थि, मु’त्र थैलीको मुनि हुन्छ र यसले पिसाब बग्ने नलीलाई छोपेर राखेको हुन्छ । प्रोस्टेटमा समस्या देखियो भने सुरुमा पिसाब फेर्दा असजिलो हुँदै जान्छ । जस्तोः पिसाब फेर्न सुरु गर्न गाह्रो हुनु, एकचोटि पिसाब सुरु भए पछि रोक्न गाह्रो हुनु आदि । उमरेसँगै प्रोस्टेट पनि ठूलो हुँदै जान्छ । प्रोस्टेट ठूलो हुन नदिन र पिसाब गर्दा समस्या नहोस् भनी औषधिद्वारा उपचार सुरु गरिन्छ । यदि औषधिबाट निको भएन भने अ’परेसन गर्नु नै जाती हुन्छ ।
अपरेसन गर्नको लागि तीनचारवटा विकल्प छन् । तपाईँको प्रोस्टेटको अवस्थाअनुसार जाँच गरेर निधो गरिन्छ । त्यसको लागि यहाँले युरोलोजिस्टसँग छलफल गर्नुपर्छ । प्रोस्टेटको समस्या भएकाहरूले आफ्नो दैनिकीमा केही फेरबदल गर्दा केही फाइदा पुग्छ । राती सुत्नुभन्दा एकदुई घण्टा अगाडिदेखि पानी नखाँदा राती­राती उठ्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । पिसाब गर्न मन लाग्नेबित्तिकै अथवा एउटै समयमा पिसाब गर्ने बानीले पनि सहयोग गर्छ । तपाईँलाई भएको प्रोस्टेटको उपचार गर्नैपर्छ । त्यसका लागि आफ्नो युरोलोजिस्टसँग भेटेर समस्याको निदान गर्नुहोला ।
उहाँले नै प्रोस्टेटको अवस्था हेरेर तीनचार विकल्पमध्ये उपयुक्त अपरेसन गर्नुहुनेछ । जस्तै, टियुआरपी । प्रोस्टेटसम्बन्धी उपचार गरेपछि ७०­८० प्रतिशतमा यौन समस्या आउँछ । जस्तै, इरेक्सन राम्रो न हुने, रेट्रोग्रेड इजाकुलेसन हुने, चरमसुखमा फरक हुने आदि समस्या देखिन्छन् । यी समस्याको प्रोस्टेटको उपचारपछिमात्र लक्षण हेरी उपचार गरिन्छ । त्यसकारणले प्रोस्टेटसम्बन्धी अपरेसनपछि यौनसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ । त्यसका लागि प्रोस्टेटको उपचारपछि मात्र यौ;न समस्याको उपचार गर्नुपर्छ ।
म’हिनावारीको बेला यौ’न स’म्पर्क गर्दा के हुन्छ ? धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी भएको बेला (सेक्स) यौ’न सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावारीको बेलामा यौ’न सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
उनीहरुले भनेका छन् । यो व्यक्तिगत इच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो । कसैलाई महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन, परम्परागत भाषामा नछुने भएको सम्म भनिन्छ । तर महिनावारी भएका बेला यौ’न सम्पर्क गर्न नहुने भन्ने कुनै बैज्ञानिक तथ्य भने छैन । महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्दा महिलालाई फाइदा हुन्छ । यस्तो बेलामा सम्भोग गर्दा निस्कने हर्मोनले महिनावारीको दुखाइ कम गर्छ । धेरै महिलाले अरू बेलाभन्दा महिनावारी भएको बेला सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द लिने गर्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि असुरक्षित सम्पर्क गरेमा यौ’न रोग लाग्ने मात्र होइन, गर्भवती हुनसक्ने खतरा समेत रहन्छ । त्यसकारणले महिनावारीको बेला ध्यान नदिँदा पछि दुःख पाइन्छ । महिनावारी सुरु हुँदा, प्रोजेस्ट्रोन भन्ने होर्मोनेले गर्दा पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन सुरु गराउँछ जसले गर्दा पाठेघरबाट रगतसहित अरु पदार्थहरू महिनावारीको रूपमा बाहिर निस्कछ । महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्दा, चरमसुखको बेला पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन हुन्छ, जसले गर्दा, सम्भोगपछि अरु पदार्थसहित रगत अलि बढी बग्नसक्छ । र महिनावारीको समयावधिलाई पनि कम गर्छ ।
तसर्थ महिनावारी हुदा सुरक्षित तरिकाले यौ’न सम्पर्क गर्दा कुनै हानी नहुने चिकित्सकको राय रहेको छ । यौ’न सम्पर्क गर्दा कण्डमको प्रयोग नगर्न पुरूषहरूले गर्ने बहाना र वास्तविकता – पुरुषहरु सम्भोग गर्दा क’ण्डम लगाउनु पर्छ भनेर अनौठो बहाना बनाउने गर्दछन । तर उनीहरु यो भुल्छन कि क’ण्डम लगाउनाले चाहना नभएको गर्भ रहनबाट बच्न सकिन्छ र विभिन्न यौ’न रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ भनेर । यदि हामी मनोवैज्ञानिक कारणको कुरा गर्ने हो भने यसको एउटा मात्र जवाफ आउछ कि पुरुषहरु सहवासको बेला कुनै पनि बन्धन मन पराउदैनन् । उनीहरुलाई यस्तो लाग्छ कण्डम उनीहरु र पार्टनरको बिचमा यस्तो पर्खाल हो जुन उनीहरु र से’क्स पार्टनरलाई एक हुन रोक्छ।
धेरै पटक हामीलेपढेको वा सुनेको छौ क’ण्डमको प्रयोगले गर्भ रहनबाट जोगिनुको साथै सम्भोगबाट फैलिने संक्रमणबाट आफु र आफ्नो सेक्स पार्टनर दुवै बच्न सक्छ भनेर तर पुरुषहरु कण्डम प्रयोग नगर्ने अनेकौ बहाना बनाउने गर्छन। पुरुषहरूले बनाउने केही बहानाहरु निम्न छन् : १. मेरो साइजको क’ण्डम आउँदैन पुरुषहरुले आफ्नो महिला पार्टनरलाई दिने बहाना मध्ये एक मेरो साइजको क’ण्डम नै पाउदैन, यो प्राय पुरुषहरुले दिने बहाना यहि हो।
यदि उनीहरुले यस्तो बहाना बनाउनुको अर्थ उनको लि’ङ्गको चौडाई र लम्बाई होइन, उनीहरु यो भन्न चाहन्छन कि उनको लिङ्गको चौडाई यति ठुलो छ कि कुनै क’ण्डम उसको लिङ्गमा ठिक हुदैन या त लि’ङ्ग यति सानो छ कि क’ण्डम उसको लि’ङ्गमा बस्दैन अनि क’ण्डम आफै बाहिर निस्कन्छ। वास्तविकता – बजारमा हरेक साइजको क’ण्डम उपलब्ध छन्। अनि १.२५ इंच देखि माथिका क’ण्डम पाईन्छ। सायद बजारमा पाइने सबैभन्दा ठुलो साइजको क’ण्डम भन्दा ठुलो कुनै पुरुषको लि’ङ्ग हुदैन।
२. क’ण्डमको कारणले सम्बन्धमा दुरी बढ्ने गर्छ ? सम्भोगले दुई पार्टनरलाई नजिक ल्याउनुको साथै आध्यात्मिक र रोमान्टिक बनाउछ र दुई जनालाई महसुस गराउदछ। तर पुरुषहरुको लागि यो बहाना बन्न जान्छ। क’ण्डमको प्रयोगले दुई जना बीच दुरी बढ्न जान्छ र दुई जनाले एक अर्कालाई राम्ररी महसुस गर्न पाउदैन। यो कुरा केहि हत सम्म ठिक हो। क’ण्डमको प्रयोगले संवेदनशीलतामा केहि कमी आउँछ फलस्वरुप पुरुषको सन्तुष्टिमा केहि कमी आउँछ।
वास्तविकता – लि’ङ्गको संवेदनशीलतामा कमी आउनुको दोश्रो पक्ष यो पनि हो। लामो समयसम्म वि’र्य स्खलित नहुनु र लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरसंग रोमान्स गर्नालेले आफ्नो पार्टनरलाई चरम आनन्द दिन मद्दत मिल्छ। कण्डमको प्रयोगले संवेदनशीलतामा कमि आएमा कुनै चिल्लो पदार्थको प्रयोग गरेर संवेदनशीलता बढाउन सकिन्छ। ३. म सुरक्षित छु : पुरुषहरुसंग अचम्मको बहाना धेरै हुन्छन। धेरै दिन देखि मैले से’क्स गरेको छैन म सुरक्षित छु। त्यसैले क’ण्डम लगाउन आवश्यक छैन।
वास्तविकता – तपार्रइले सम्भोग नगरेको २ हप्ता होस् या २ वर्ष, हरेक मान्छेले यौ’न संचित संक्रमणको सूक्ष्म जीव आफुसंगै बोकेर हिडिरहेको हुन्छ। अर्को सम्भावना यो हो कि आफ्नो पार्टनरलाई सिफिलिस र गोनोरिया जस्तो यौ’न संचारित (Sexual Transmitted Disease) खतरनाक रोग सार्न सक्छ । ४. म नियन्त्रण गर्छु- धेरै जसो पुरुषहरु आफुले आफुलाई धेरै भरोसा गर्ने गर्छन। यौ’न सम्पर्क बेला चरम आनन्द प्राप्तिको समयमा विर्य स्खलित हुनु भन्दा पहिले वि’र्य स्खलन बाहिर गर्छु अनि आफ्नो से’क्स पार्टनर गर्भवती हुदैन।
वास्तविकता – ८०५ पुरुष हरु वि’र्य स्खलन बाहिर निकाल्न असफल हुने गर्दछन र २०५ ले निकाल्न सफल भएता पनि यौ’न रोग संक्रमणको खतरा भने रहन्छ। सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो हो कि सम्भोगको समयमा तपाइको लिङ्गबाट विर्य निष्कासन हुन्छ र यस वि’र्य स्खलनमा शुक्राणु संख्या धेरै वा थोरै हुन्छन तर महिला गर्भवती हुनको लागि एउटा शुक्राणुको जरुरत हुन्छ लाखौ वा करोडौको होइन।
५. क’ण्डमको गन्धले मलाई उल्टी आउँछ – जब सम्म बजारमा सुगन्धित क’ण्डम आको थिएन तब यो बहाना नभई एक वास्तविक पनि हो क’ण्डमको रबरको गन्धले रोमान्चमा कमि आउँथ्यो।वास्तविकता स् अहिलेको समयमा बजारमा अलग – अलग किसिमको बास्नादार क’ण्डम पाईन्छ। यसको सुगन्ध पहिले जस्तो असर पुर्याउने हुदैन बरु यसमा भएको सुगन्धले यौ’न सन्तुष्टि बढी दिने गर्दछ।
६. मलाई एलर्जी छ : यो कुरा सत्य पनि हुन सक्छ। लेटेक्सले बनेको कण्डमको प्रयोग गर्दा एलर्जी हुन्छ। वास्तविकता : लेटेक्स क’ण्डमबाट एलर्जी हुने मानिस मात्र १५ छन्। यो पनि हुन सक्छ तपाई त्यो १ ५ सुची भित्र पर्न सक्छ। तर यस समस्याको हल बजारमा उपलब्ध छन्। तपाई लेटेक्स क’ण्डमको सट्टामा अर्को पोलीउरेथनबाट बनेको क’ण्डम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस पोलीउरेथन क’ण्डमबाट एलर्जी हुने सम्भावना ०५ हुन्छ।
७. तिमी नै गर्भनिरोधक चक्की खाउ: पुरुषहरु यो सोच्छन नचाहेको गर्भ रहनुको जिम्मेवार महिला हुन् र गर्भनिरोधक चक्की खादा नचाहेको गर्भ रहनबाट बच्न सकिन्छ। यसबाट उनीहरुको चरम आनन्दमा कमि आउँदैन। वास्तविकता : यो कुरा सहि हो गर्भनिरोधक चक्की महिलाले खादा गर्भ रहदैन तर गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगबाट यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोगबाट बच्न भने सकिदैन। अर्को मुख्य कारण भनेको गर्भनिरोधक चक्कीको खादाको असर महिलाहरुको मोटाउने, महिनावारीमा समस्या देखा पर्ने, उल्टी आउने, स्तन कोमलता, टाउको दुख्ने र काम गर्न अल्छी लाग्ने जस्ता अनेकौ समस्या देखा पर्दछ।
८. मैले पहिला कहिले कण्डम प्रयोग गरेको छैन : जो पुरुष आफुलाई बहादुर देखाउन चाहन्छ। उसले गर्भका साथ भन्ने गर्दछ मैले कहिले पनि क’ण्डम प्रयोग गरेको छैन, यस्ता पुरुषहरुसंग सम्भोग गर्न नसोचे पनि हुन्छ किनकि तपाइलाई थाहा छैन उसले काँ-काँ र कुन-कुन महिलासंग यौ’न सम्बन्ध गरिसकेको छ र कुन चाही रोगको संक्रमण गर्ने जीवाणु बोकेर हिडिरहेको छ। घिउ लगाएर यौ’न स’म्पर्क गर्दा हुने रहेछ यस्तो अचम्मको फाइदाहरु- यसै पनि घिउको धेरै फाइद हुने गर्दछ । तर यदी कुरा सम्भोगको छ भने घिउको अझै नै महत्वपुर्ण फाइदाहरु रहेका छ्न । आउनुहोस जानौ के के फाइदाहरु हुन्छन त ?
१. यदी तपाईंले सुद्धा गाउको घिउ लागाएर सम्भोग गर्नुभयो भने तपाईंको पट्नरको यो’नी कहिले खुकुलो हुँदैन । २. तपाईं रेगुलर घिउ खाने गर्नु भएको छ भने तपाईं धेरै समय सम पनि जवान देख्न सक्नु हुनेछ । ३. जो ब्यक्ती घिउ लगएर सम्भोग गर्छ , त्यस ब्यक्तीलाई सम्भोग पछी कुनै प्रकारको इन्फेक्सन हुने डर हुँदैन । ४. सम्भोगको समय घिउ लगाउँए हो भने लि’ङ्ग मजबुत हुने गर्दछ र लामो समय सम्म सम्भोगको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ ।
५. यदी घिउ लागाएर सम्भोग गर्ने हो भने अनान्द २ गुणाले बड्ने बताइएको छ । के यौ’न सम्पर्क गर्दा २ मिनेट पनी टिक्न सक्नुहुन्न रु टेन्सन नलिनुहोस यो एक चोटि पढ्नुहोसर्् घरेलु बिधीसहितै यौ’न दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ । तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले सेक्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई सेक्स क्षमता बढाउने औषधी आफ्नै घर वरपर निःशुल्क रुपमा पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुदैन । आयुर्वेदमा से’क्ससँग जोडिएका बिभिन्न समस्याको उपचार सैकडौं वर्षदेखि हुदै आएको छ ।
रोमन सभ्यतामा पनि मसलाको प्रयोगबाट से’क्स क्षमता बढाउने गरेको पाइएको छ । ठूलो इलायची, इलायची, ल्वाङ्ग, दालचीनी र कालो मरिच जस्ता मसलाको सन्तुलित सेवनले से’क्सको शक्ति बढाउँछ । त्यसैले पनि यिनैको सुगन्धको प्रयोग धेरै एरोटिक परफ्यूम बनाउन प्रयोग हुन्छ । ज्वानोको दाना नियमित रुपमा सेवन गरे सेक्सको इच्छा शक्ति बढ्छ । एक गिलास दूधमा कालो मरिचको पाउडर र बदाम मिलाएर सत्नुभन्दा अघि सेवन गरेमा पनि यौ’नको इच्छा बढाउन सहयोग हुन्छ ।
महमा कालो मरिच मिलाएर सेवन गरेमा पनि यौ’न शक्ति बढ्छ । यसले चिसोबाट पनि बचाउँछ । अश्वगंधा, रातो चन्दन, ल्वाङ्ग, सिधे नूनलाई बराबर मिलाएर खाएमा पनि शरीरलाई उत्तेजक बनाउछ र लामो समयसम्म यौन सम्पर्क राख्न सकिन्छ । अर्जुन रुखको सेतो बोक्रालाई धूलो बनाइ दूधमा मिलाएर रातिमा सेवन गरेमा कामेच्छा बढ्ने गर्दछ । यो पाउडर आयुर्वेदिक औषधि पसलमा पाइन्छ ।
यौ’न दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ । तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले सेक्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई सेक्स क्षमता बढाउने औषधी आफ्नै घर वरपर निःशुल्क रुपमा पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुदैन ।
आयुर्वेदमा से’क्ससँग जोडिएका बिभिन्न समस्याको उपचार सैकडौं वर्षदेखि हुदै आएको छ । रोमन सभ्यतामा पनि मसलाको प्रयोगबाट सेक्स क्षमता बढाउने गरेको पाइएको छ । ठूलो इलायची, इलायची, ल्वाङ्ग, दालचीनी र कालो मरिच जस्ता मसलाको सन्तुलित सेवनले से’क्सको शक्ति बढाउँछ । त्यसैले पनि यिनैको सुगन्धको प्रयोग धेरै एरोटिक परफ्यूम बनाउन प्रयोग हुन्छ । ज्वानोको दाना नियमित रुपमा सेवन गरे सेक्सको इच्छा शक्ति बढ्छ । एक गिलास दूधमा कालो मरिचको पाउडर र बदाम मिलाएर सत्नुभन्दा अघि सेवन गरेमा पनि यौनको इच्छा बढाउन सहयोग हुन्छ ।
महमा कालो मरिच मिलाएर सेवन गरेमा पनि यौन शक्ति बढ्छ । यसले चिसोबाट पनि बचाउँछ । अश्वगंधा, रातो चन्दन, ल्वाङ्ग, सिधे नूनलाई बराबर मिलाएर खाएमा पनि शरीरलाई उत्तेजक बनाउछ र लामो समयसम्म यौन सम्पर्क राख्न सकिन्छ । अर्जुन रुखको सेतो बोक्रालाई धूलो बनाइ दूधमा मिलाएर रातिमा सेवन गरेमा कामेच्छा बढ्ने गर्दछ । यो पाउडर आयुर्वेदिक औषधि पसलमा पाइन्छ । कान्तिपथबाट
No Comments on १७ वर्षीय किशोरको ७० वर्षीया बृद्धा संग प्रेम विबाह ! यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी
काठमाडौं,अमेरिकाकी एक ७० वर्षीया बृद्धाले १७ वर्षीय किशोरसंग बिवाह गरेकी छिन् ।
किशोर भन्दा ती बृद्धा ५३ वर्ष जेठी छिन् । उनीहरुको बिवाह सन् २०१५ मा भएको थियो । त्यतिबेला ग्यारी नाम गरेका ती किशोर १७ वर्षका थिए,त्यसैगरी अल्मेडा नाम गरेकी ती बृद्धा ७० वर्षकी थिइन् ।
तर अहिले ग्यारी २४ वर्ष र अल्मेडा ७७ वर्ष पुगेकी छिन् । उनीहरुको बिवाहबारे आफन्तलाई थाहा भएता पनि भर्खरैमात्र यो घटना बाहिर आएको हो । यसलाई ग्यारी र अल्मेडाले नै बाहिर ल्याएका हुन् ।
उनीहरुको यो विबाह सार्वजनिक भएपछि सबैले यो जोडीको आलोचना गरिरहेका छन् । तर, त्यो कुराले उनीहरूलाई कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध निकै राम्रो चलिरहेको र आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर कुनै पछुतो नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बेलायती पत्रिका ‘मिरर’ का अनुसार यो जोडी पहिलो पटक सन् २०१५ मा अल्मेडाको छोरा रोबर्टको अन्त्येष्टिमा भेटिएका थिए । यो भेटपछि ग्यारी र अल्मेडाबीच कुराकानी सुरु हुन थाल्यो । त्यसको १५ दिनपछि उनीहरुले विवाह गरे । उनीहरूको विवाह सहज भने थिएन । उनीहरूले त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाई छोडिदिए जसले उनीहरूको सम्बन्धलाई समर्थन गरेनन् ।
उमेर अन्तरालले उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा कुनै असर नपरेको र अल्मेडा आफ्नो जीवन साथी रहेको ग्यारीले बताएका छन् । अल्मेडा पनि ग्यारीसँग विवाह गरेर निकै खुशी छिन् । विवाह भएको ७ वर्ष भैसक्दा पनि परिवार र साथीहरूले उनीहरूको विवाहालाई भने अझै राम्रो मानेका छैनन् ।
नेपालमा महिलाले किन पुरुषले भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् से’क्स टोय ?
No Comments on नेपालमा महिलाले किन पुरुषले भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् से’क्स टोय ?
काठमाडौंमा दैनिक औसत ८/९ वटाको दरले से’क्स टोयको व्यापार हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि टोयको माग बढ्दै गएको छ । देशभर भने नौवटा भन्दा बढी टोयका पसल छन् । स्वचालित पे निसदेखि स्त न, भेजिना मसाजरको सामग्रीलगायतका यौ’न सामग्री नेपालमा उपलब्ध छ । काठमाडौंमा पछिल्लो समय फुल बडीको टोय उपलब्ध नभए पनि पोखरामा भने उपलब्ध छ ।
काठमाडौंमा ११ सयदेखि १२–१३ हजार मूल्यसम्मका खेलौना उपलब्ध छन् । नेपालमा क न्डम हाउसले होलसेलमा टोय बिक्री गर्दै आएको छ । हाउसबाटै काठमाडौंबाहिर पनि टोय जाने गरेको छ । नेपालमा चीन, थाइल्यान्ड, जापान, मलेसिया र कोरियाबाट टोय ल्याउने गरिन्छ ।अनलाइन बिजनेस मेरो सपिङले तीन वर्षदेखि टोयको व्यापार गर्दै आएको छ ।
मेरो सपिङ पनि पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दोब्बर संख्यामा टोय बि’क्री हुने बताउँछ । मेरो सपिङमा भने अत्यधिक मात्रामा टिन एजर्सले टोयको माग गर्ने गर्छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो परिचय भने राम्रोसँग नखुलाउने गरेको सञ्चालक बताउँछन् ।
व्यवसायी भने टोयको उत्साहप्रद व्यापारचाहिँ नभएको बताउँछन् ।
तीनदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको टोय अत्यधिक बिक्री हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।यो पनि पढ्नुहोस : बिहान ५ मिनेट लामो श्वास लिने छाड्ने गर्दा हुन्छ यस्ता फाइदाश्वासप्रश्वास एउटा अनियन्त्रित प्रक्रिया हो । श्वास फेर्न हामीलाई कुनै थप उर्जा खर्च गर्नुपर्दैन । तर, राम्रोसँग श्वासप्रश्वास लिएमा यसले स्वास्थ मात्र बनाउँदैन मानिसलाई दीर्घजीवि पनि बनाउँछ । बिहान ५ मिनेट जति लामो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ । यसरी गरिने श्वासप्रश्वास व्यायायमका केही फाइदा यस प्रकार छन्ः
तनाबमुक्त बनाउछः गहिरो श्वासले शरिरमा अक्सिजनको प्रबाह बढाउछ र तनाब, चिन्ता र त्रास घटाउँछ ।शरिरको बिष फालिदिन्छः श्वासप्रश्वासबाट मानिसको शरिरबाट ७० प्रतिशत भन्दा बढी खराब तत्व निस्कासन गरिदिन्छ ।
दिमागलाई शान्त बनाइदिन्छः अत्यधिक तनाब र चिन्ताले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन्छ । गहिरो श्वास लिँदा दिमागमा अक्सिजनको आपूर्ती बढाउँछ र चिन्ताको मात्रा घट्नुका साथै शरिरलाई आनन्द र प्रफुल्ल बनाउँछ ।अन्य अंगलाई पनि सहयोगः गहिरो श्वास प्रश्वासको व्यायामले मुटु, पेट, लिभर, साना आन्दालाई मसाज गरिदिन्छ र ती अंगमा रक्तप्रबाह गरिदिन्छ
थाहा छ ? पुरुषले यी ३ ‘अंग’ हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिला
No Comments on थाहा छ ? पुरुषले यी ३ ‘अंग’ हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिला
तस्बिरमा भारतिय मोडल
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन,
विज्ञानले केही चमनत्कार गरेर लिं-ग परिवर्तन पनि गरेका छन तर त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् ।
बेलायतबाट प्रकाशित एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग हि-प) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ । महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् ।
यो पनि- महिला र पुरुषले धेरै बेरसम्म गर्न नहुने ४ काम
विष्णु पुराणमा विभिन्न शास्त्रीय महत्व र मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ । विष्णु पुराणमा भूगोल, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ ।
जो मानिस सुखी जीवन बिताउन चाहान्छ, त्यसले विष्णु पुराणका यी नियम जान्नै पर्ने हुन्छ ।
-निरोगी तथा राम्रो बनिराख्नका लागि हरेक दिन विहा नुहाउनुपर्दछ । यदि नुहाएको बेला दिमागमा केहि कुरा आयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ । विहानै उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला ताराहरुको छाया हेर्दै नुहाएमा अलक्ष्मी, समस्या र नराम्रो शक्ति नष्ट भएर जान्छ । नुहाउने समयमा गुरु मन्त्र, स्तोत्र तथा श्लोकहरु वा भगवानको नाम लियो भने पनि अक्षय पुण्यको लाभ हुन्छ ।तर धेरैबेरसम्म नुहाउँदा भने स्वास्थ्यलाई हानी हुन्छ ।
-हरेक दिन ७ देखि ९ घण्टासम्म निदाउन आवश्यक हुन्छ । यदि राम्रो निन्द्रा पुगेन भने तपाई बिरामी हुनुहुनेछ । शास्त्रका अनुसार विहा छिटै उठ्ने र बेलुका चाँडै सुत्नुपर्दछ । तर शास्त्रले दिनमा सुत्नुलाई नराम्रो मान्ने गरेको छ ।
-विहानको समयमा श्रीमानश्रीमतीले शा री रिक सम्पर्क गर्न नहुने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ । किनभने विहानको समयमा शा री रिक स म्बन्ध राख्दा विभिन्न रोगले सताउँदछ ।
-सूर्योदय भन्दा पहिला उठ्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन यसले जीवनमा समृद्धि पनि लिएर आउँछ । विहान धेरै समय सुत्दा तपाईलाई विभिन्न रोगले सताउँने र लक्ष्मी पनि रुष्ट हुने मान्यता छ। चलिरहनुको कुनै अर्थ रहदैन।
No Comments on बिवाह भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारणहरु